ထူးထူးခြားခြား လူခြောက်လေးသုံးကြိမ်မွေးခဲ့သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထူးထူးခြားခြား လူခြောက်လေးသုံးကြိမ်မွေးခဲ့သူ
Posted by may flowers on Jul 10, 2012 in Creative Writing, Short Story | 19 comments
ကျွန်မတို့ နေထိုင်ရာဒီလောကကြီးမှာ တစ်ခါတစ်လေ အံ့ဩဖွယ်ရာ မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ
ကိစ္စတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကိစ္စတွေဟာ ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ၊ တွေ့ဖူး
တဲ့သူတွေ၊ မြင်ဖူးတဲ့သူတွေသာ ယုံကြည့်နိုင်ကြပြီး မမြင်ဖူးမတွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်
ပုံပြင်လာပြောနေတာပါလို့ အထင်ခံရလောက်အောင်ဆန်းကြယ်တတ်ပါတယ်။ ရွာသူ
ရွာသားတွေကော လူခြောက်( လူပုံသဏ္ဍန်သေးသေးလေး) လေးတွေ ရှိတယ်ပြောရင်
ကျွန်မလည်း တော်တော်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ သူများတွေလူခြောက်ကလေးမွေးတဲ့
အကြောင်းပြောတာဖြစ်ဖြစ် ၊ စာအုပ်တွေမှာလူခြောက်ကလေးတွေအကြောင်းပါတာဖြစ်
ဖြစ် ကြားရရင် ဖတ်ရရင်မယုံကြည်ခဲ့တာအမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရှစ်တန်းကျောင်းသူအ
ရွယ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်လောက်ကတော့ အဲဒီမယုံကြည်မှုတွေကို အပြီးတိုင်ခြေဖျက်နိုင်မဲ့ကိစ္စ
လေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မတို့နေတဲ့မြို့လေးနဲ့ လေးမိုင်လောက်
ဝေးတဲ့ ရွာလေးမှာ လူခြောက်လေးတစ်ယောက်မွေးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုကျွန်မကြား
တော့ သိပ်တော့မယုံကြည်လှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကိစ္စကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းနဲ့ကျောင်း
မှာ တော့ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ အထူးအဆန်းဆိုသိချင်မြင်ချင်ကြတဲ့ ဆယ်ကျော်
“ငါတို့ နေလည်ကျောင်းဆင်းရင် သွားကြည့်ရအောင်ဟာ”
လို့အဖေါ်စပ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီရွာနဲ့ကျွန်မတို့ ကျောင်းကငါးမိုင်နီးပါးလောက်
တော့ဝေးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဆရာ၊ ဆရာမတွေ စာသင်နေတုံးမမြင်အောင်ထမင်း
ကို သုတ်သုတ်ခိုးစားကြပါတယ်( ဆရာ၊ ဆရာမတွေက သူတို့စာသင်နေတုံး တစ်ခုခု
စားနေတာ မြင်ရင်အနဲလေးခုံပေါ်တက်ရပ်နေဖို့က သေချာသလောက်မို့ သူတို့မမြင်
အောင် ခပ်မြန်မြန်လေးစားရတာမို့ ကိုယ့်ထမင်းဘူးကို ကိုယ်စားတာတောင်ခိုးစားရ
တာလို့ သုံးရေးတာပါ)။ ဒါနဲ့ နေ့လည်ထမင်းစားကျောင်းဆင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်
ယောက် နေပူပူ( မြန်မာပြည်ရဲ့ မိုးတွင်းဘက်နေဟာ ပူရင်တော်တော်လေးပူပါတယ်)
မှာ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ အဆိုပါရွာလေးကို ဒိုးကြတာပေါ့။ သိပ်မလည်ရှာသူ မေဖလားဝါး
က ပေါင်ချိန် ၉ဝ သာသာလောက်ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းနင်းတဲ့ စက်ဘီးနောက်မှာ အငြိမ့်သား
လေ။ ကိုယ်ကလဲသိပ်တော့ ဝရှာတာမဟုတ်ပါဘူး ၁၂ဝ ပေါင်လောက်ကတော့ မကျော်
ရင်သာနေမယ်မလျော့တာတော့သေချာပါတယ်။ ဒါနဲ့နေပူပူမှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်
ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ အဲဒီရွာကိုရောက်အောင် သွားကြပါတယ်။ ဟိုရောက်တော့ မောတော့
တာပါပဲ။ အိမ်ရှင် အမျိုးသမီး( လူခြောက်လေးရဲ့မိခင်) က လူခြောက်လေးမွေးတယ်ဆို
တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ။ လူခြောက်လေးလည်း မရှိပါဘူးပြောပြီး ဘူးခံလွှတ်တာကြောင့်
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တော်တော်လေးစိတ်ပျက်သွားကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပြန်မယ်ဆိုပြီး
ထွက်လာခဲ့ရာမှ ကျွန်မလည်းဒီရွာမှာ နေတဲ့ကျွန်မအဒေါ်ကိုရုတ်တရက်သတိရသွားပါ
တယ်။ ဒီအိမ်မှာလူခြောက်လေးမွေးတာ ပြောတဲ့သူကအသေအခြာပြောပြီး တိတိကျကျ
သတင်း လိုဖြစ်နေပြီးတော့ မတွေ့ရပဲ ဘူးခံငြင်းတာခံရတာကြောင့် မကျေနပ်တာလည်း
ပါပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ရွာရဲ့အတွင်းဘက်နားလောက်မှာရှိတဲ့ ကျွန်မအဒေါ်တွေ
အိမ်ကို သွားကြရအောင်လို့သူငယ်ချင်းကို အဖော်စပ်ပြီး အဒေါ်တွေအိမ်ကိုဆက်သွား
ကြပါတယ်။ အဒေါ်တွေ အိမ်ရောက်တော့
“ဒေါ်ဒေါ် ………ဟိုရွာလယ်ကအိမ်မှာ လူခြောက်လေးမွေးတာတကယ်လားဟင်”
လို့ စကားစမေးတော့ ကျွန်မအဒေါ်က
လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း အားတက်သွားတာကြောင့် ကျွန်မတို့ရောက်ခဲ့
တာကို သူငယ်ချင်းကိုမပြောရန်မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲပြပြီး ကျွန်မအဒေါ်ကိုဆက်ပြော
လို့ စကားလမ်းကြောင်းပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ အဒေါ်က ကြည့်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း တကယ်
မွေးတာဖြစ်ကြောင်းကို ပြောတော့ ကျွန်မက သမီးတို့မသွားရဲလို့ လိုက်ပို့ပေးပါဆိုပြီး
ကျွန်မအဒေါ်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ညာခေါ်လာခဲ့ပြီး သုံးယောက်သား ထိုလူခြောက်လေး
ထိုအိမ်ကို ရောက်တော့ အဒေါ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ (အဒေါ်လည်း တော်တော်လေးကိုပြောယူရပါတယ်) ကျွန်မတို့ စောစောက မြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့
လူခြောက်လေးဆိုသော( လူပုံသဏ္ဍန်အပြည့်အစုံပါသော) အကောင်သေးသေးလေးကို
အပိုင်း-၂ ကိုဆက်လက်ရေးသား ပေးပါ့မယ်။
ကင်မရာ ပါသွားတယ် မဟုတ်လား။
ပုံ ရအောင် ရိုက် ယူ လာ နော်။
အပိုင်း ၂ ကို ပုံ လေး နဲ့ ဖတ်ချင် တယ်။
စော ရီး ၁၉၉၂ က ဆို တော့ ကင်မရာတွေ ဘယ် သိပ် ပေါ အုံးမှာ လဲ နော်။
သဂျီး တို့ ဆီ မှာ ဆို ရင် တော့ ပေါ မှာ ပေါ့။
လူခြောက် ရယ် သဂျီး တို့ ဆီမှာ မွေး လိုက် ပါတော့ လား။
ဟိဟိ လစ် ပြီ။
အင်းးးးးလူခြောက်ကလေးတွေကို သာမန်ကလေးတွေလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပေး
ကြတာရယ်၊အိမ်ထောင်ပြုဖို ့အသက်အရွယ်ရောက်ရင် အိမ်မက်ပေးတတ်ပြီး
သူ ့လိုလူခြောက်ရှိတဲ့အိမ်ကို ညွှန်တတ်တယ်လို ့ကြားဖူးတယ်နော်။
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says:
အမဟာ ဂေဇက်မှာ စာရေးနေသူ ဖြစ်ခဲ့ရင် …
ကင်မလာလက်စွမ်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို ဖော်ပြနိုင်မှာ အမှန်ပဲဗျ ..
ပြီးတော့ ဒီလို အကြောင်းတွေကို မယုံတတ်တဲ့ သဂျီးဆိုတဲ့ လူဂျီးကိုလည်း
ဟော … ဒီမှာဗျာ ..
မယုံရင် မြန်မာပြည် ပြန်လာပြီးကြည့်လှည့်လို့တောင် ပြောလိုက်လို့ ရသေးဗျ ..
အဲ့ဒီလို လူခြောက်လေး မွေးတဲ့ အဖြစ်ကတော့ တကယ့် အဖြစ်တွေပါပဲဗျာ ..
ကျနော်တို့ ရွာမှာလည်း မွေးခဲ့ဖူးတယ်ဗျ ..
ဒါပေမယ့် မွေးပြီး နှစ်ပါတ်လောက်မှာပဲ အထားမတတ်လို့ ပျောက်သွားခဲ့ရပါတယ် ..
ပြီးခဲ့တာတွေကို ယုံခြင်း မယုံခြင်း ထက် နောင်မှာထူးဆန်းတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကမ္ဘာမှာချပြနိုင်ဖို့ပါ။
laypai ရေ အဲဒီအချိန်တုံးက ကင်မလာဆိုတာ ကျွန်မတို့မြို့သေးသေးလေးမှာ ဘယ်သူမှကိုင်တာ
မစ္စတာ တောက်တဲ့ ရေ အဲဒီအချိန်တုံးက ကျွန်မက ရှစ်တန်းကျောင်းသူ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ပါ..
ကိုဇောက်ထိုးရေ မယုံတဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့မရဘူးလေ ကျွန်မတောင်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့လို့
စိတ်အနှောက် အယှက် ဖြစ်သွားရင် တောင် ပန်ပါ တယ် may flowers.
ကျနော် ရည် ရွယ် ချက် က လူခြောက် နဲ့ ပတ် သက် ပြီး သဂျီး ဆီ (သို့ ) တယောက်ယောက် ဆီ က ဘာ အချက် အလက် များ ရ မလဲ လို့ ဖွ ကြည့် တာ။
ခု ဘက်စုံ နှံ့စပ်တဲ့ သဂျီးဆီက လူခြောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် တွေ ဖတ်ရမှတ်ရ လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူခြောက် နဲ့ ပတ် သက် ပြီး မြန်မာ ပြည်အနေနဲ့ နေရာ ဒေသ တော်တော် များများ မှာ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်ရပ် လေး တွေ ရှိ နေ တတ် ကြတာလို့ ပါ။
ကျေးလက် ဒေသ တွေမှာ ပို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရွာ ဒါမှ မဟုတ် ရွာနီးချုပ်စပ် တွေ မှာ လူခြောက်မွေးတယ် ဆိုတာထက် လူခြောက် မွေး ပြီး အဲ့ ဒီ မိသားစု ဟာ ငွေရေး ကြေးရေး အဆင်ပြေ လာတဲ့ သတင်း အကြောင်းအရာ ကို ကျေးလက် နေ သူ တော်တော် များများ ကြားဖူးကြမယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
အပိုင်း ၂ ကို ဆက်မျှော် နေမယ် လို့။
အင်း… လူခြောက်လေးတွေဆိုတော့သေးသေးလေးတွေနေမှာပေါ့နော် ပုံလေးတွေသာတင်ပေးနိုင်ရင်ဘယ်
အပိုင်း(၂) ကို မျှော်နေပါတယ်။
လူခြောက်၃ကြိမ်တောင်မွေးတယ်ဆိုတော့.. အဲဒီမိခင်က. သားအိမ်တခုခုချို့ယွင်းနေလို့ဖြစ်ရမယ်..
Dead dry fetus သန္ဓေသားခြောက်
Medical Writings – Medical Writings
Monday, 18 June 2012 13:59
သန္ဓေသားခြောက် မွေးတာကို ဆေးပညာအရ ဘယ်လိုခေါ်ပြီး အလွယ်နည်း နဲ့ အင်္ဂလိပ် လိုပြောရင် ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ နောက်ပြီး ဘယ်လိုကြောင်းတွေကြောင့် သားခြောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါသလဲ။ သူတို့မှာ ဝိဉာဉ်ရှိနေတယ် ဆိုတာရော ကြားဖူးပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဘလော့ မှာ ဆောင်းပါးလေး ရေးပေးပါအုံးနော်။
“သန္ဓေသားခြောက်” ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဘူးတယ်။ ဆေးကျောင်းရောက်တော့ မသင်ရဘူး။ ကျောင်းပြီးလို့ လက်တွေ့နယ်မှာလဲ ကိုယ်တိုင် မတွေ့ဘူးဘူး။ ကြိုးစားဖြေဘို့ရာ လေ့လာမှုနယ်ကို ချဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုစာနဲ့ ရိုက်ရှာတာလဲ မတွေ့ပြန်ပါ။ ဒါဖြင့် မြန်မာပြည်မှာသာ ရှိတာလား။ ပြောနေကြတာလား။
မြန်မာလိုရေးပြီး (အင်တာနက်) မှာတင်တာ နည်းနည်းပါးပါး တွေ့ရတယ်။
1. လူခြောက်ကလေး (အမိဝမ်းမှာကတည်းက သေနေသောရုပ်ကလပ်ကို ထိုကလေး မသေခင်က စွဲလမ်းသောကြောင့် ရုပ်ကလပ်မှာ စုတည်စိတ် ကပ်ငြိပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသောပြိတ္တာ တစ်မျိုးလို့ထင်ပါတယ်။)
2. လူခြောက် ဟူသည် ဘုံဘဝတမျိုးမှ သတ္တဝါမဟုတ်ပါ၊ ခန္ဓာငါးပါးရှိသည့် လူ့ဘဝ၌ပင် ဇလာဗုဇ ပဋိသန္ဓေ နေကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။
3. လူခြောက်သည် အသက်ရှင်ခြင်း၊ အာဟာရမှီဝဲခြင်း၊ ကျင်လည်လှုပ်ရှားခြင်း မရှိ၊ ၎င်းအား မှီတွယ်စွဲဝင်နေသော ဝေမာနိက ပေတ၊ ဂန္ဓဗ္ဗ၏ သဘောသဘာဝ အတိုင်းသာလျှင် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားသင့်ပါသည်။ အမိဝမ်းတွင်းတွင် သေဆုံးပြီး ဝေမာနိကပေတ ဂန္ဓဗ္ဗ မဖြစ်၊ သို့မဟုတ် မှီတွယ် စွဲကပ်မှု မရှိ၍ မထူးမခြား အသေအတိုင်း မွေး၍ စွန့်ပစ်ရသော လူခြောက်များလည်း ရှိသေးကြောင်း သိရပါသည်။
အင်္ဂလိပ်လို တင်တာတွေထဲမှာ သန္ဓေသားကို အခြောက်မှုံ့လုပ်ပြီး ဆေးဖေါ်တာတွေကိုသာ တွေ့ရပါတယ်။
• ၇-၅-၂ဝ၁၂ Thousands of pills filled with powdered human baby ပျက်စီးသွားတဲ့ လူ့သန္ဓေသားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆေးတောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာ
• ၇-၅-၂ဝ၁၂ Koreans busted for stamina pills made from dead babies ကိုရီးယားမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ လူ့သန္ဓေသားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အားဆေးတွေ ဖမ်းဆီးရမိ
• ၇-၅-၂ဝ၁၂ China makes “medicinal” pills from aborted babies တရုပ်ပြည်မှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ လူ့သန္ဓေသားနဲ့ ဆေးတွေထုတ်လုပ်
• ၈-၅-၂ဝ၁၂ Aborted Human Babies Used as Cure-All Medicine in Asian Countries အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ လူ့သန္ဓေသားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ရောဂါမှန်သမျှ ပျောက်မဲ့ဆေးဖေါ်စပ်
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ပြောကြတဲ့ သန္ဓေသားခြောက်၊ လူခြောက်လေးမွေးတယ်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ မှန်းဆကြည့်ပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တယ်ဆိုတာ ကလေး၊ သန္ဓေသားမထွက်ခင် သွေးအရင်ဆင်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရင့်ရင် ရင့်သလို သွေးဆင်းတာ များတယ်။ အများအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်နုချိန်မှာ ပျက်ရင်၊ ဖျက်ရင် သွေးလို့သာ ထင်ရ၊ မြင်ရမယ်။ နဲနဲ သတိထားကြည့်မှ (တစ်ရှူး) လို့ ခေါ်တဲ့ အသားစလေးတွေ တွေ့မယ်။ မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်မှသာ (တစ်ရှူး) က သန္ဓေသား နဲ့ အချင်းခွဲသိနိုင်တယ်။ တချို့မှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ သိတောင်မသိဘဲ ဖြစ်တယ်။ ရာသီသွေး နဲနဲပိုဆင်းတာမျိုးသာရှိတယ်။
ကလေး အသေမွေးတာကို Stillbirth (SB) ခေါ်တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အထဲမှာ ကလေးသေသွားရင် မအေရဲ့ သားအိမ်က ညှစ်လာပြီး ကလေးကို မွေးထုတ်မယ်။ Stillbirth အများစုဟာ နေ့စေ့လစေ့ဖြစ်တယ်။ ၁၅-၃၅% သော ကလေး အသေမွေးသူတွေမှာ အကြောင်းရင်းရှာမရပါ။ ကိုယ်ဝန် ၂ဝ ပါတ် (၅ လ) အတွင်း ပျက်ရင် ကို်ယ်ဝန်ပျက်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ၂ဝ ပါတ်ထက် ရင့်နေတာကနေ အသက်မရှင်တဲ့ကလေးမွေးရင် Stillbirth ခေါ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်ဝန် ၁၁၅ ကနေ ၂ဝဝ မှာ ၁ ယောက် ကလေး အသေမွေးတယ်။ ကလေးအသေမွေးတာ လျှော့ကျလာတယ်။ တကမာ္ဘလုံးကို တွက်ချက်ရင် ၁၉၉၅ တုံးက ၂၂့၁% ရှိခဲ့ရာကနေ ၂ဝဝ၉ မှာ ၁၈့၉% အထိကျလာတယ်။
Stillbirth ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အများဆုံးတွေက –
1. Placenta problems အချင်း မူမမှန်ဖြစ်ခြင်းများ၊
2. Birth defects ကလေးအင်္ဂါချို့ယွင်းချက်ပါနေခြင်း၊ ဥပမာ Pulmonary hypoplasia ရောဂါ၊
3. Growth Restriction ကလေးဖွံ့ထွားမှု ကန့်သတ်သွားခြင်း၊ ဥပမာ ကလေး သေးလွန်းခြင်း၊ အောက်စီဂျင်မဝခြင်း၊
4. Bacterial infections မိခင်ဖြစ်ဖြစ် ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊
1. Chromosome abnormalities (ခရိူမိုဇုမ်း) မမှန်ခြင်း၊
2. Injuries ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊
3. Maternal diseases မိခင်မှာ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ အတက်ရောဂါ၊
4. Umbilical cord problems ချက်ကြိုးမူမမှန်ဖြစ်ခြင်းများ၊
5. Sudden severe blood loss ရုတ်ရက်သွေးယိုခြင်း၊ placental abruptions အတွင်းထဲ အချင်းကွာကျခြင်း၊
6. Cardiac arrest မိခင် နှလုံးခုန်ရပ်ရာကနေ ကလေး နှလုံးခုန်ရပ်သွားခြင်း၊
7. Postdate pregnancy နေ့စေ့ပေမဲ့ မမွေးခြင်း၊
8. Rh disease မအေနဲ့ ကလေး (အာရ်အိတ်ချ်) မတူဖြစ်နေခြင်း၊
9. Radiation poisoning ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း၊
Coffin birth ခေါ်တာလဲ ရှိသေးတယ်။ ဆေးစာနဲ့ဆို Postmortem fetal extrusion လို့ တိတိကျကျ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တယောက် သေဆုံးပြီး ပုတ်ပွနေချိန်မှာ ဗိုက်ထဲမှာ ဖိအားဖြစ်လာလို့ ကလေးအသေ ဗဂျိုင်းနားကနေ မွေးလာတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ကလေးအသေက အဲလိုပုတ်ပွနေတာ မဟုတ်ဘူး။
(Postmortem changes လူသေရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ) အထဲမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။ “Mummification (မမ်မီ) ဖြစ်စဉ်ဆိုတာ လေဝင်-လေထွက်ကောင်းနေမယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ခြောက်သွေ့ပြီး နွေးနေမယ်ဆိုရင် သေဆုံးပြီး ၁ ပါတ် အကြာမှာ (မမ်မီ) ဖြစ်စဉ် အစောဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအတိုင်းထားရင် ၃-၆ ပါတ်မှာ ပြည့်စုံသွားမယ်။ ပေါ်နေတဲ့ လက်ချောင်းတွေ၊ ခြေချောင်းတွေမှာ သိသာတယ်။ ရှေးဟောင်း အီဂျစ်မှာ တမင်တကာ Embalming the body လုပ်ပေးရတာမျိုးသဘော အလိုလို ဖြစ်လာတာမျိုးကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုဖြစ်တော့ ကွယ်လွန် (ပျံလွန်) ပြီးတော့ တန်ခိုးပိုကြီးစေတယ်။” ဒါကြောင့် အသေမွေးလာတဲ့ကလေးဟာလဲ အဲလိုအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် အခြောက်ကလေး ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ချုပ်ရေးရရင် ဆေးပညာမှာ သန္ဓေသားခြောက်ကို လေ့လာထားတာ၊ သုတေသနလုပ်တာ မရှိသလောက်ပါ။ သိလာတာ ရှိရင်တော့ ရေးပါမယ်။ ဝိဉာဉ်အကြောင်းအရာ ဆေးပညာနဲ့ လက်လှမ်းမမီပါ။
ငယ်ငယ်က ပုံပြင်လိုလို ဒန္တာရီလိုလို ပြောကြဆိုကြတာကြားဖူးတာကတော့ လူခြောက်မွေးတဲ့မိသားစုဟာ စီးပွားတက်လာတယ်ပြောတယ်။ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒီလူခြောက်တွေဟာ ငွေ(စည်းစိမ်ဥစ္စာ) ကို ရှာဖွေပေးနိုင်တယ်ဆိုလားပဲ။သူ့ကိုထည့်ထားတဲ့ သေတ္တာ၊ပုံး၊ ဘီဒိုထဲကို ရွှေဆွဲကြီးတို့ ငွေ ဒင်္ဂါးပြားတို့ ကို အကောင်အထည်လိုက်ယူလာခဲ့တာဆိုပဲ။ သူတို့ ဘယ်ကသွားရှာခဲ့သလဲ၊ သူတို့ရှေးဘဝက သိမ်းဆည်းထားခဲ့တာဆိုရင်လည်း လူခြောက်တိုင်းဟာ သူတော်ကောင်းတွေများလား။ အရက်သမား၊ဖဲသမားလူခြောက်များရှိသေးရင်လည်းသိချင်ပါ၏။
ကိုကြောင်လေးရေ .. ကျွန်မကြားဖူးတာတော့ လူခြောက်အများစုက … သူခိုးလေးတွေတဲ့ … သူများ ဟာတေ ွယူလာလာပေးတယ်ကြားဖူးတာပဲ … ။ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပေးပြီး အလှူပြုခိုင်းတာတော့ ရှားသတဲ့ ….. နောက်ပြီး လူခြောက်တွေသေတာနဲ့ .. ချက်ခြင်း ပုပ်သတဲ့လေ … ။
အပိုင်း2ကိုစောင့်နေမယ်နော်…
ကျုပ်လဲ လူခြောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝတ်ထု ရုပ်ပြ ဇါတ်လမ်းတွေ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်
ယုံလားလို့မေးရင် may be လို့ဖြေပါမယ်
သဂျီးကတော့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်အပြည့်အစုံ နဲ့ မန့်သွားလို့ ဗဟုသုတရပါတယ်
မေဖလားဝါးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဇါတ်လမ်းကတော့ ရသတစ်ခုမို့
အင်း လူခြောက်ကို ငုံတို့ ကြီးဒေါ်တစ်ယောက်မွေးဖူးတယ်လို့ အမေကပြောဖူးတယ် .. ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး5လလောက်ထိ ဗိုက်က ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်လိုပဲ စူထွက်လာပေမယ့် နောက်ပိုင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ဗိုက်က ပိန်သွားတယ်တဲ့ ..9လကျတော့ လူခြောက်လေးမွေးလာတာတဲ့ … အဲ့ဒီကလေးကိုတော့ သူများတွေက စီးပွားတက်အောင် အိမ်မှာ တကယ့်ကလေးလို ပြုစုထားဖို့ (စားချိန် ၊ ကျောင်းနေချိန်၊ အိမ်ထောင်ပြုချိန် အတိုင်းလုပ်ပေးဖို့) ပြောပေမယ့် ကြီးဒေါ်က အယုံအကြည်မရှိလို့ မြေမြှုပ်လိုက်တယ်တဲ့ …
သဂျီးရေ တကယ်တော့လူခြောက်ဆိုတာ ပြိတ္တာတစ်မျိုးပါပဲ။ အမိဝမ်းတွင်းမှာ လူဆိုပြီးအကောင်အထည်
နဲ့ ဖြစ်လာပြီးမှ အဲဒီလူသားလေးဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သေဆုံးသွားရာမှာ နာမ်ကောင်လေးဟာ ခန္တာ
ကိုယ်ကို စွဲလမ်းပြီးထိုရုပ်ခန္တာကိုယ်ကို ကပ်ညိစွဲကပ်ပြီး လူခြောက်ကလေးဖြစ်လာတာပါ။တကယ်တော့
အဲဒီ လူခြောက်လေးဟာအသက်တော့မရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အလယ်ပိုင်းကရွာလေးတစ်ရွာက လူခြောက်
လေး တစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်ဖူးပါတယ်။ သူဟာအတိတ်ဘဝက သတ်သတ်လွတ်စားပြီး တရားကျင့်သူ
တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သတ်သတ်လွတ်မစားတဲ့ သီလစင်ကျယ်တဲ့ရဟန်းတော်တွေကို
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆို ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားမရပဲ သေလွန်သောအခါငရဲမှာခံခဲ့ ရပါတယ်။
အဆိုပါငရဲမှ လွတ်လာပြန်တော့ ယခုအမိဝမ်းတွင်းမှာ လူလာဖြစ်ရပေမဲ့ အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကြောင့်
လူခြောက်( ဝေမာနိကပြိတ္တာ) ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလူခြောက်လေးဟာ အတိတ်ကတရားကျင့်ကြံ
ပွားများခဲ့တဲ့ကံကြောင့် တန်ခိုးအနည်းငယ်ရှိတာကြောင့် သူ့မိခင်ကို အိမ်မက်ထဲမှာ ဆေးနည်းပြောပြပြီး
ဆေးကုခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သတ္တာဝါတွေကိုလည်း ကယ်ရင်းမိခင်ကိုလည်း ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်တာပါတဲ့။
အဲလို ပြောလိုက်လို့သပ်သပ်လွတ်စားတာ အကျိုးမရှိဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်။ ထိုလူခြောက်လေးခံရတာက
သပ်သပ်လွတ်စားတာကြောင့်မဟုတ်ပဲ ဘုရားသားတော် အကျင့်သီလနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းသံဃာ တော်တွေ
ကို စော်ကားပြောဆိုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒီလို ခံခဲ့ရတာကိုပြောချင်တာပါ။ တကယ်တော့ လူခြောက်ဆိုတာ
ဝေမာနိက ပြိတ္တာအသေးစားတစ်မျိုးပါပဲ။ မေဖလားဝါးဉာဏ် တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ ပြောတာပါ။ မှားရင်လဲ
မှား နေနိုင်တာမို့သိသူများရှိရင် ပြောပြဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နော်။
တောသားလေး ၊star ၊နဲ့တေလေငှက် ၊ နှင်းဆီ ငုံ ၊ Ma Ei ကိုပေ၊ ကြောင်လေး ရေ
မေဖလားဝါးရေ .. လူခြောက်လေးတွေအကြောင်းကို နက္ခတရောင်ခြည်မှာ အရင်က အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့ဖူးသလို .. ဓါတ်ပုံလည်း မြင်တွေ့ဖူးပါတယ် .. ဒါပေမယ့် .. လူခြောက်လေးတွေမွေးတာကိုတော့ .ဆေးပညာအယူအရ … အသက်ရှိတယ်လို့ လက်မခံပါဘူး ။
ဒါပေမယ့်လည်း .. ဆေးပညာအရ အသက်မရှိပေမယ့်လည်း … လူခြောက်လေးတွေက .. အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိ …အသက်ရှိပါတယ် … ။ ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုပါပဲ … ။ လူခြောက်လေးမွေးခဲ့ဖူးတဲ့ မိခင်နဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ် … စာတွေထဲ ဖတ်ဖူးတဲ့အတိုင်းပဲ .. တကယ်မိခင်နဲ့ လူခြောက်ကြား ဆက်သွယ်မှုတွေရှိခဲ့သတဲ့ … ။
ကိုုယ်ဝန်လွယ်တဲ့အချိန်ကတော့သာမန်ပဲတဲ့ .. လရင့်လာတော့မှ ကိုယ်ဝန်က .. နာကျင်မှုမရှိ ၊ ဘာခံစားမှုမှ မရှိပဲ ..တဖြည်းဖြည်း ပြန်ပိန်သွားခဲ့သတဲ့ … အရင်ခေတ်ခါတုန်းကတော့ .. အက်ထရာစောင်းတွေဘာတွေ ရိုက်ကြည့်တာလည်း ခေတ်မစားသေးဘူးထင်ပါရဲ့ .. ၊ အခုလက်ရှိလည်း .. မြို့စွန်ရပ်ကွက်တွေမှာ ဗိုက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ … တခုခုဆို အပ်ထရာစောင်းရိုက်ရမှန်း မသိသေးဘူး … ကဲ ..ထားပါတော့ … ။ အဲ့ဒီမိန်းမ လစေ့တော့.. အိပ်မက်လိုလို ကလေးတစ်ယောက်က လာနေမယ်ပြောတယ် .. ဒါနဲ့ သူလက်ခံလိုက်ပါသတဲ့ .. ပြီးနောက်မှာ … အခြောက်လေးမွေးတယ် … ။ ယောကျာ်းဖြစ်သူက မြေမြှုပ်ဖို့ လုပ်ပေမယ့်..သူမကတော့ ဒီတိုင်း .. ထားကြည့်စေချင်တယ် … ။ ဒီမှာ ထူးခြားတာက စပါပြီ … လူ ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်ပိုင်း တစ်ခု ၊ ပြတ်တောက်ပြီး အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတွင်းမှာ ပြန်မတွဲချုပ်နိုင်ဘူးဆို … ပုပ်သွားတတ်တာ အားလုံး အသိပါ … ။ အခု လူခြောက်ကလည်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်က အသားဆိုင် တစ်ခုပါပဲ .. ဒါပေမယ့် သူကတော့ ပုပ်မသွားပါဘူးတဲ့ … ။
လူခြောက်လေးမှာ လူလိုပဲ အင်္ဂါစုံအကုန်ပါတယ် ….အရွယ်ပမာဏ ခြောက်လက်မခန့်ပဲ ရှိတယ် … ။ သူ့ကို တခြားကလေးတွေလို အဝတ်စင်ရတယ် .. တကယ်ဝတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ .. သူ့အတွက် သီးသန့်ဝယ်ပြီး သူ့နားထားပေးတာကို ဆိုလိုပါသတဲ့… ။ ကလေးက .. လှုပ်ခြင်း ရယ်ခြင်း မရှိသလို … အရုပ်တစ်ခုလိုပါပဲ… ။ ဒါပေမယ့် … နှလုံးပိစိလေးကတော့ နွေးနွေးလေးဖြစ်နေသတဲ့ … မိခင်ဖြစ်သူကို ညဘက်မှာ အိပ်မက်ပေးပြီးစကားပြောပါတယ် .. ။ လူခြောက်အများစုက သူခိုးလေးတွေဖြစ်နေတာလည်း အံ့ဖွယ်ရာပါပဲ … ။ ဘာအစွမ်းလည်းတော့မသိပေမယ့်…. သူခိုးလူခြောက်လေးတွေက … မိခင်ကို ပစ္စည်း ခိုးခိုးပေးတတ်တယ် …. ။ ဒီနေ့ဘာခိုးပေးမယ်ပြောလျှင် နောက်နေ့ ..သူ့အိပ်ယာနားရောက်ကိုရောက်နေသတဲ့ .. တချို့ လူခြောက်တွေကတော့ ဥစ္စာပေးတာတို့ … သိမ်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ပြပေးတာတို့ လုပ်ပြီး အလှူတန်း လုပ်ခိုင်းသတဲ့လေ … ။ နားရှိလို့သာ ကြားရပြီး ၊ စာအုပ်တွေထဲ မျက်စိရှိလို့သာ ဖတ်ဖူးတာ .. မယုံပေမယ့် …. ကိုယ်တိုင်စကားပြောခွင့်ရတဲ့ မိန်းမကတော့ … လိမ်မယ့်ရုပ်မဟုတ်လောက်ဘူး … ။ သူတို့ သိပ်ကြာကြာ အသက်မရှင်ပါဘူးတဲ့ …. ။ တချို့ဆို ရက်ပိုင်း ၊ တချို့ဆို လပိုင်းလောက်ထိပဲ ရှည်သတဲ့ … ။ ကြည့်ရတာ လူခြောက်လေးတွေက .. ဗြိတ္တာဘဝနဲ့ လူ့ဘဝ စပ်ကူး မတ်ကူးများလား မသိဘူး .. အဟိ … ။ လူခြောက်ကို ဆေးဖော်လျှင် ဘာကောင်းတယ်ဆိုလားပဲ .. ကြားထူးသေးတယ် …
etone ရေ ခုလိုလူခြောက်အကြောင်းသိတာလေးတွေ ဝေမျှပြောပြပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်။